पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातको सम्पत्ति रोक्का- समाचार - कान्तिपुर समाचार
अख्तियारमा लामो समय काम गरी हालै अवकाश लिएका एक सहसचिवका अनुसार बढी भ्रष्टाचार हुने भनेर कहलिएका राजस्व, भन्सार र सडक कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई अख्तियारले छानबिन गर्ने १३ पाने सम्पत्ति विवरण भराउँथ्यो । ‘त्यसको केही दिनमै बस्न्यातको घरमा कर्मचारी बोलाइन्थे,’ ती सहसचिवले सुनाए, ‘जसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी मिहिनेत गरेका हुन्थ्यौं, त्यसको केही दिनमै यसको केही भेटिएलाजस्तो छैन भनेर आश्चर्यजनक रूपमा तामेलीमा राख्ने रायसुझाव उहाँबाट आउँथ्यो ।’ उनका अनुसार सडक विभागका कर्मचारीका अलावा आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको मुद्दा यसैगरी टुंग्याउन दबाब थियो । बस्न्यातले अवकाश पाएपछि खड्कामाथि मुद्दा चल्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तपाईंमाथि छानबिन गरिरहेको रहेछ । किन होला ?
मलाई यसबारे थाहा छैन । केही पनि थाहा छैन ।
मुद्दा दायर गर्न प्रमाणहरू भेटिइसकेका छन् रे त ?
तर छानबिन गर्ने निकायले हेरिरहेका छन् त ?
रैथाने बीउ संरक्षण गर्न सांसदको सुझाव
मंसिर १०, २०७६ राजु चौधरी
काठमाडौँ — आयातित बीउले किसानहरू समस्यामा परेपछि सांसदहरूले रैथाने जातका बीउ संरक्षण गर्दै गुणस्तर बढाउन सुझाव दिएका छन् । बीउबिजन (दोस्रो सशोधन) विधेयक २०७५ सम्बन्धमा सोमबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको छलफलमा सांसदहरूले गुणस्तर बढाउन परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
भारतीय हाइब्रिड जातको धान रोपेका १३ जिल्लाका किसान पीडित भएपछि उनीहरूले रैथाने बीउलाई संरक्षण गर्न सुझाएका हुन् । ‘बीउबिजनको हकमा बीउ राम्रो भए बोट राम्रो हुन्छ । फल पनि राम्रो हुन्छ,’ सांसद शान्तिमाया तामाङले भनिन्, ‘रैथाने जातलाई संरक्षण गर्दै गुणस्तर बढाउन जोड दिऊँ । बीउको परीक्षण, बीउको अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसले बीउ आफैं निखारेर आउँछ ।’ नेपालमा संरक्षित बीउबिजन व्यवस्थित र संरक्षण नहुँदा समस्या भएको उनले बताइन । बीउबिजनको हकमा विज्ञहरूबाट पनि स्पष्ट धारणा आउन जरुरी रहेको उनले बताइन् ।
सांसद रेणु यादवले पनि बीउकै कारण बाली उत्पादन हुने मुख्य प्रदेश २ मा समस्या भएको बताइन् । ‘धानसँगै मकै बीउको पनि समस्या छ । सरकारले जिम्मेवारी लिएन,’ यादवले भनिन्, ‘अहिले अस्तव्यस्त छ । सरकारले माटो परीक्षणको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुन माटोमा कुन बीउ/तरकारी खेती गर्ने पहिचान गर्नुपर्छ ।’ जानकारका अनुसार बीउसँगै मलखाद पनि पनि गुणस्तहीन भित्रिने गरेको छ ।
मल खाद्य पनि गुणस्तरहीन हुन थप जटिलता थपेको उनीहरूको दाबी छ । एग्रोभेटले राम्रो बीउ दिएका छैनन् । नक्कली बीउ वितरण हुँदा पनि नियमन हुन सकेको छैन । जिल्लाजिल्लामा भएको ज्ञान केन्द्र/शाखाले नियमन गर्न सकेको छैन । ‘माटो खाद्य/मल र बीउलाई संरक्षण गर्न नसके समस्या हुन्छ,’ यादवले भनिन्, ‘त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि विज्ञ टोलीको समिति गठन गर्नुपर्छ ।’
सांसद राजबहादुर बुढाले बीउबिजन क्षेत्रमा छाडा प्रवृत्तिले किसानलाई समस्या परेको बताए । उनले भने, ‘गुणात्मक हिसाबले महत्त्वपूर्ण जातलाई संरक्षण गरौं ।’
सांसद सीतादेवी यादवले पनि प्रदेश २ कृषिमै आश्रित भए पनि तरकारीदेखि अन्नबालीमा परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता भएको बताइन् । ‘भारतबाट खाद्य/मल आए उब्जनी हुन्छ । भारतले रोके उत्पादन हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘तरकारी, धान, माछालगायत क्षेत्रका लागि धेरै विज्ञ नियुक्त भएका छन् । कहाँ–कहाँ कस्तो भयो । नवनियुक्त कृषिमन्त्रीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले कृषिका क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचार भएको बताउँदै स्थलगत निरीक्षण गरेर नीति बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘५ हजार आँपको बीउ स्वीकृत हुँदा किसानले एक हजार पनि पाउन सकेनन्,’ उनले भनिन् ।
सांसद राधा ज्ञवालीले पनि बीउकै कारण किसानले ठूलो पीडा खेपेको बताउँदै सरकार सचेत हुनुपर्ने बताइन् । ‘सस्तोका कारण बीउ/मल आयात हुन्छ । परीक्षणबिना प्रयोग हुँदा किसान पीडामा परे,’ उनले भनिन्, ‘राम्रो बीउ ल्याएर संरक्षण पनि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि अध्ययन–अनुसन्धान बढी गर्नुपर्छ ।’ यसका लागि बजेटमै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताइन् । सासद सत्यनारायण शर्माले सस्तोको नाममा नक्कली बीउ आयात बन्द गर्नुपर्ने बताए । नक्कली बीउ आयात नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले तत्काल निरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । ‘खाद्य भण्डार तराईमा धेरै छ । तर, नक्कली बीउका कारण तराई मारमा परेको छ,’ उनले भने, ‘बीउबिजनको हकमा भद्रगोल छ । कुन क्षेत्रमा कुन बीउ उचित हुन्छ, निर्धारण गर्नुपर्छ ।’
सांसद घनश्याम खतिवडाले पन बीउबिजन क्षेत्रमा देखिएको बेथितिलाई अन्त गर्नुपर्ने बताए । त्यस क्रममा नेपाल भेटेरिनरी एसोसएसनका अध्यक्ष शीतलकाजी श्रेष्ठ नक्कलीबाट बच्न डीएनए फिंगर प्रिन्ट परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । नक्कली बीउ वितरण प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सजायको दायरा बढाउनुपर्ने बताए ।
कृषिसचिव युवकध्वज जीसीले गुणस्तरको हकमा मन्त्रालय सचेत रहेको बताए । ‘गुणस्तरीय बीउको विषयमा चिन्तित छौं,’ सासदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सचिव जीसीले भने, ‘माटो परीक्षण पनि सँगसँगै हुन्छ । माटो परीक्षणका लागि माटो भ्यान ल्याब छ । मागको आधारमा माटो परीक्षण भइरहेको छ ।’ हाल बजारमा सूचीकृत नभएका बीउ छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ ।
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७६ ०८:१२